के तपाई बेहुली बन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ मेकअपको तरिका - inaruwaonline.com
के तपाई बेहुली बन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ मेकअपको तरिका
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७३ समय: ६:५६:०५
यो बिहेको सिजन हो । तर, मौसम जाडो छ । गर्मी होस् या जाडो, जुनकुनै समयमा पनि बेहुली मेकअपको स्टेप एउटै हुन्छ । तर, गर्मीमा जस्तो पानी र पसिनाको सामना गर्नु नपर्ने तथा स्किन भने केही फुस्रो हुने भएकाले जाडोको मेकअपमा केही विशेष कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ब्युटिसियन शारदा थापा क्षेत्रीले अनुहार, आँखा, ओठ, कपाल र नङको मेकअपबारे पूरा जानकारी दिएकी छिन्: नङपालिस बेहुलीले पानीमा काम गर्नुपर्ने भइरहन्छ । संस्कारअनुसार पटक–पटक नुहाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्य खालको पालिस नुहाउँदा या पानीमा काम गर्दा खुइलिने खतरा हुन्छ । यस्तो हुँदा पालिस लगाइराख्नु झन्झटिलो हुन्छ । त्यसैले बेहुलीले जेल पालिस प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अहिले जेल पालिसको ट्रेन्ड छ । जेल पालिसले बेहुलीको इच्छाअनुसार नेल आर्ट गर्न पनि सकिन्छ । जेल पालिस लगाएको तीन महिनासम्म टिकिरहन्छ । बेहुलीका लागि रातो पालिस नै विशेष उपयुक्त हुन्छ । अनुहार, आँखा र ओठ चिसोमा स्किन ड्राई हुन्छ । धेरै ड्राई स्किन छ भने बेहुली बन्ने अघिल्लो राति नै गिल्सिरिन र रोजवाटर मिक्स गरेर लगाउनु राम्रो हुन्छ । यसले छालाको सुक्खापन कम गर्छ । मेकअप सुरु गर्नुअघि छालाको अवस्थाअनुसार सामान्य क्लिन्जिङ प्रयोग गरेर अनुहार सफा गर्नुपर्छ ।
अनावश्यक रौँ छन् भने पनि हटाउनुपर्छ । सफा अनुहार सुक्खा पारेर स्किन प्राइमर र मोस्चराइजर लगाउने । जाडोमा मोस्चराइजर अनिवार्य आवश्यक पर्छ । आँखाको तल डार्क सर्कल छ भने एल्लो कन्सिलरले छोपिदिने । पूरै अनुहारमा पेनस्टिक ‘ए’ र ‘बी’ मिक्स गरेर हल्का चिसो स्पन्जले ब्लेन्ड गरिदिने, तर यो स्किन टोनसँग म्याचिङ हुनुपर्छ । पेनस्टिक (ई)ले नाक, निधार, जलाइन र ब्लसर प्वाइन्ट बनाउने । पूरै अनुहारमा पेनकेक लगाएर हल्का चिसो स्पन्जले ब्लेन्ड गरिदिने । ह्वाइट र एल्लो लुज पाउडर फुल फेसमा लगाएर ब्रसले मिलाउने । हाइलाइटिङ प्वाइन्टमा पिंक र गोल्ड मिक्स सिमर पाउडर लगाउने ।
गालामा मरुन कलरको ब्लसर गर्ने र लिक्विड ब्लन्जरले सेटिङ मिलाउने । जाडोमा पाउडरभन्दा लिक्विड ब्लन्जर ठीक हुन्छ । गालाभन्दा माथि हाइलाइटर पनि लिक्विड बेसमै लगाउने । आँखाको इनर कर्नरमा रेड, ओरेन्ज तथा आउट कर्नरमा लाइट, ग्रिन, ब्ल्याक, डार्क ब्राउनजस्ता स्याडो भर्ने । आइबलमा गोल्डेन टचअप गरिदिने । आइबोनमा गोल्डेन या सिल्भर कलरको हाइलाइटरले भरिदिने । आइब्रो डिफाइनिङ पाउडर या आइब्रो पेन्सिलले आइब्रोज डिफाइन गरेर ट्रान्सपरेन्ट मस्कारा लगाइदिने । ब्ल्याक जेल आइलाइनर लगाइदिने । आइल्यासेसमा ट्रान्सपरेन्ट मस्कारा लगाउने र टेम्पोररी ल्यासेस लगाइदिने ।
लिपस्टिक पनि मरुन अथवा रेड कलरको लगाइदिने । यसमा गोल्डेन लिपब्लस लगाइदिने । गाजल लगाउन नछुटाउने । निधारमा टीका लगाइदिने । अन्त्यमा मेकअप फिक्सर गरेर चटअप गरिदिने । कपालको जुरो जुरो बनाउँदा बेहुलीको शारीरिक उचाइ र अनुहारको सेपलाई आधार मान्नुपर्छ । अग्लो शरीर छ भने जुरो होचो खालको बनाउनुपर्छ । धेरै पफ उठाउनु हुँदैन । यसले बेहुलीको उचाइ मेन्टेन गर्छ । यस्तै, होचो कदकी बेहुलीले जुरोको हाइट बढाउनुपर्छ ।
उचाइ र अनुहारसँग मिल्ने गरी केही अग्लो जुरो बनाएर पफ माथि उठाइदिएपछि हाइट राम्रो देखिन्छ । यस्तै, अनुहारको बनोट लाम्चो छ भने होचो देखाउने गरी जुरो तयार पार्नुपर्छ । बेहुलीको मेकअप गर्दा नै केही कटिङ गरेर फेस मिलाउनुपर्छ । अनुहारको बनोट गोलो छ भने फेस मेकअपमै हल्का कटिङ गरेर केही पातलो लुक्स निकाल्नुपर्छ । यसपछि मात्रै थोरै लाम्चो आकारको जुरो बनाउनुपर्छ । अन्य खालको अनुहारको सवालमा भने बेहुलीको हाइटमै विशेष ख्याल दिए पुग्छ । नयाँ पत्रिकाबाट